Flu teas: Pịa ebe a ma chọpụta ihe kacha mma!
Ahụekere ahụekere: fattening ma ọ bụ ifelata? Nwere ike iri ihe na nri?
Teas maka Nchegbu: Kwụsị ajọ ihe a otu mgbe!
ahụ ike	 24 August 2016
Flu tii: Hụ nri kacha mma!
Chọpụta ebe a kachasị mma na tii na-agwakọta ihe iji nyere aka na mgbaàmà flu. Hụ ihe ndị a na ndị ọzọ ị ga-eso!
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri bụ oge a na-enwe mgbanwe ihu igwe na mberede, iru mmiri na mmiri ozuzo, si otú a na-eweta ọtụtụ nje na nje bacteria na ya na ọrịa na-atụ ụjọ. A maara dịka nje influenza, flu na-abịa na ọtụtụ mgbaàmà nke nwere ike imetụta ndụ gị ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu.
A otutu fever, malaise, ụkwara, scratchy akpịrị, imi imi, orùrù, oyi ajirija, indisposition na nro na ahụ, ndị a niile bụ ndị a maara nke ọma mgbaàmà maka ndị nwere flu na i nwere ike inyere na-alụ ọgụ ha na flu tii. A mfe nke eke usọbọ i nwere ike ịkwadebe onwe gị n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ na mma gị ụbọchị na ọnọdụ gị.
Flu teas dị ọnụ ala, ịkwesighi itinye ego niile na ụlọ ahịa ọgwụ ma ha mekwara ka ahụike gị na ihe mgbaàmà gị dị mma ma ọ gaghị eme ka ịhi ụra dị ka ọgwụgwọ ọdịnala ọdịnala.
Flu tii na-ada ka nnukwu azịza, ọ bụghị ya? Ma ha bụ! N'iburu nke ahụ n'uche, anyị nyochara ma mee nhọrọ nke kacha mma tii maka flu. Dee ndụmọdụ ndị a na otu esi eme ya.
Flu tii Ntụziaka
Lemọn, ginger na garlic tii
Teas ama ama nke ọma maka ọgwụ ha, lemon nwere ọtụtụ vitamin C ma bụrụ onye na-atụ anya, ginger nwere njirimara iji kpochapụ akpịrị gị na galik na-enyere aka ịlụ ọgụ nje ahụ. Obụpde iko mmiri abụọ na cloves atọ nke ihe a gbanwere, hapụ ya ka ọ sie maka minit 5, gbanyụọ ọkụ ma gbakwunye mkpụrụ osisi lemon ma hapụ ya ka ọ dị elu maka nkeji 10. Mgbe nke ahụ gasịrị, gbanye tii gị ma drinkụọ ya ugboro abụọ n'ụbọchị.
Jiri naanị elderflow n'ihi na epupụta na-egbu egbu. Nwere ike ịchọta akụrụngwa a na ụlọ ahịa ọkachamara na ngwaahịa ndị sitere n'okike. Weta otu iko mmiri na obụpde, gbanyụọ ọkụ ma tinye otu okpokoro nke okooko ndị okenye, hapụ ya ka ọ gbanye nkeji iri wee drinkụọ tii gị.
Eucalyptus, mint na tii rosemary
Atọ dị ike ma dị ike megide flu. Sie iko mmiri abụọ yana akwụkwọ eucalyptus abụọ, akwụkwọ mint atọ na mkpuru Rosemary maka nkeji atọ. Gbanyụọ ọkụ ma hapụ tii gị ka ọ kpuchie maka minit 3 ọzọ. Ọ ga-adị njikere ị drinkụ.
Lemọn, mmanụ a honeyụ na ginger tii
Nke a bụ gbaa ma dobe! Na mgbakwunye na ịbụ tii na-atọ ụtọ, ị nwere ike mechaa mee ya mmanụ a honeyụ, nke nwere ọtụtụ vitamin na moisturizes mucosa. Maka ọkara lita mmiri, sie ọnụ mmiri nke otu lemon, oroma atọ na ibe 3 cm nke ginger sliced ​​maka 5 nkeji. Mgbe ị gbanyụsịrị ọkụ, gbakwunye ihe ọ ofụ ofụ nke lemon na-egbuke egbuke na tii, jiri mmanụ a honeyụ na-atọ ụtọ ma drinkụọ ihe dị ka iko atọ n'ụbọchị.
Ọ bụrụ na mgbaàmà flu na-aga n'ihu ihe ị kwesịrị ime bụ ịhụ dọkịta ma were ogologo ọgwụgwọ iji kpochapụ nje ahụ.
Anyị na-atụ anya na ị nwere mmasị na ndụmọdụ taa. You maara ihe ọ bụla ọzọ dị mma tii ị drinkụ n'oge flu oge? Soro anyị kwupụta!
Na-esetịpụ Marks na Ime Ime: Gịnị ka ị ga-eme iji zere? Anyị na-agwa gị ihe niile!
Ojiji nke mmanụ oliv n'èzí kichin: Chọpụta otu esi emegharị ya na ndụ gị kwa ụbọchị!
Thermogenics: Mara ihe ha bụ, otu ha si arụ ọrụ na otu ha nwere ike isi gbanwee ahụ gị!
Ntụziaka Carb dị ala 101: Kwụsị Iri Na-eri Ọma! Lee otu Ebe a!